Is-koolo Maro adag mesh / Maro adag mesh for GRC iyo EPS model - Shiinaha QuanJiang qalabka New
Maro adag Is-koolo mesh waxaa leh tolmo wanaagsan by C-galaas dun Maro adag, iyo dahaarka leh kula daahan adkaysi alkali iyo xabagta is-koolo. Waxaa loogu talagalay model adag, tusaale ahaan GRC saqafka iyo model EPS, iwm
QUANJIANG waa mid ka mid ah soo saarayaasha sare iyo iibiyeyaasha mid ka mid ah noocyada ugu caansan dunida Maro adag is-koolo mesh ee Shiinaha, soo dhaweyn si ay u iibsadaan ama kartoo Maro adag is-koolo jumlada mesh ka dhigay in Shiinaha iyo muunad lacag la'aan ah ka our warshad hesho.
Maro adag Is-koolo mesh / Maro adag mesh for GRC iyo EPS model
size mesh: 4x4mm, 4x5mm, 5x5mm, iwm
Miisaanka: 90g / m2, 110g / m2, 125g / m2, 145g / m2,152g / m2,160g / m2, iwm
Width: 38inch, 1m, 1.2M, iwm
debecsanaanta Aad iyo Maro adag is-xabag aad u dheg mesh:
Ka dib markii la isticmaalaya wax soo saarka, waxaa doono ma fududa in la bararsan yihiin ama koolo failure in 72hours.
duudduuban kasta oo ku yaal bac caag ama idiinkala hadhin kaamerada la qoraalka, tube warqada 2 inch.
Iyada oo sanduuqa kartoonka ama sariirtaada.
B.The mesh Maro adag is-koolo uu leeyahay dabeecad wanaagsan oo leh xabag iyo waqti dheer waxaa la diidi karaa, waqti isku mid ah mesh waa fududahay in aayar, waa sababta oo ah xabagta koolo waa gaar ah oo kaamil ah.
Isticmaalka for model adag, tusaale ahaan GRC saqafka iyo model EPS, iwm
Previous: Is-koolo Maro adag mesh Tape
Koolo Maro adag mesh
Fibergalss koollo mesh
Maro adag Self koollo mesh
Is koollo Maro adag mesh
Is koollo Maro adag mesh Tape
Is koollo Maro adag Tape
Is koollo Glass Fiber mesh
Is koollo mesh Tape